ဖြတ်ဖို့တော်ဝင်မေးလ် 1,600 အလုပ်အကိုင် - သတင်း Rule
ဖြတ်ဖို့တော်ဝင်မေးလ် 1,600 အလုပ်အကိုင်
အဓိကစာတိုက်အော်ပရေတာတော်ဝင်မေးလ်တွင်အင်္ဂါနေ့ကပုဆိန်စီစဉ်ထားကပြောပါတယ် 1,600 အုပ်စုတစိတ်တပိုင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်ခဲ့ခြောက်လပြီးလတ်ဆတ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်-ဖြတ်တောက် drive ကိုအောက်မှာအလုပ်အကိုင်.
တော်ဝင်မေးလ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဖြစ်မယ်လို့အလုပ်အကိုင်အများစုကိုသွားကြဖို့တစ်ဦးကကြေညာချက်တွင်ပြောကြားထားသည်, အဘယ်သူမျှမပေးအပ်ခြင်းန်ထမ်းကသူတို့ရဲ့ရာထူးဆုံးရှုံးအတူ. ဒါဟာဖန်တီးမယ်လို့သူကဆက်ပြောသည် “300 အသစ်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်အခန်းကဏ္ဍ”, တစ်ပိုက်ကွန်ကိုဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ 1,300 အလုပ်အကိုင်.
အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများကိုပတ်ပတ်လည်£သန်း 50 နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်ငွေစုကယ်နှုတ်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်, ကပြောပါတယ်.
စာတိုက်ခရီးသွားတော်ဝင်မေးလ် (TPO) (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
တော်ဝင်မေးလ်အမှုဆောင်ချုပ် Moya ဂရင်းလျှော့ချဖြတ်တောက်မှုကုမ္ပဏီအတွက်လိုအပ်သောပြောသည် “စာလုံးနှင့်ချောထုပ်စျေးကွက်များတွင်ထိရောက်စွာယှဉ်ပြိုင်ရန်”.
အစိုးရကပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက်ပိုတော်ဝင်မေးလ်၏ထက်ဝက်ထက်ချွတ်ကိုရောင်းပေမယ့်သူ့ရဲ့ရှယ်ယာ flotation ပြီးနောက်ရောနှောပြီးနောက်ကတည်းကလည်းဈေးပေါပေါကုမ္ပဏီကိုရောင်း၏အတိုက်အခံအမတ်များအားဖြင့်စွပ်စွဲခဲ့.
နိုင်ငံ၏ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုလျှော့ချဖို့ညွန့်ပေါင်းရဲ့ drive ကို၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖွဲ့စည်းအစိတ်အပိုင်း. ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲဆန့်ကျင်, ပြည်ထောင်စုလူကြီးတွေဟာအဲဒီမှာရှိတယ်ဖောက်သည်ယခုပိုမိုဆိုးရွားဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိဖြစ်ကြောင်းငြင်း.
အစိုးရကတစိတ်တပိုင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်တော်ဝင်မေးလ်မြို့တော်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုရှည်လျားစောဒကတက်ခဲ့သည်, ခေတ်မီဆက်အဘို့အများများပြားလာဝယ်လိုအားပြည့်မီ အွန်လိုင်းစျေးဝယ် ကကှကျအသွားအလာကိုထုတ်ပေး.
ဤဆောင်ပါး, ဖြတ်ဖို့တော်ဝင်မေးလ် 1,600 အလုပ်အကိုင်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
19278	1 အစိုးရ၏ဘတ်ဂျက်ချိန်ခွင်လျှာ, ပုဂ္ဂလိကပိုင်, တော်ဝင်မေးလ်
← နောက်ထပ် Lotto Winner ချေးငွေ Fortune မဂ္ဂဇင်းကွတ်ကီး နောက်တဖန်ဖူကူရှီးမားရေပိုးမွှားလျော့ကျစေသည့်စနစ်ကဆင်း →